Guddiga Dib u Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka wuxuu ku maalgelinayaa $ 2.5 milyan mashaariicda kaabayaasha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Dib u Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka wuxuu ku maalgelinayaa $ 2.5 milyan mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha
Guddiga Dib u Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka wuxuu ku maalgelinayaa $ 2.5 milyan mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha
Deeqaha iyo amaahda dulsaarka yar waxay taageeri doonaan horumarka dhaqaale ee gobollada Douglas, Franklin, Jefferson, Pacific, Skagit, Snohomish
OLYMPIA, WA - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) wuxuu ansaxiyay $ 2,572,039 deyn iyo deeqo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalka dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka ee Dekedda Degmada Douglas, Port of Pasco, Port of Port Townsend, Degmooyinka Pacific, Port of Anacortes, iyo Magaalada Everett.
Gobolka Douglas - Amaah $ 291,552 iyo $ 87,412 oo la siinayo Dekeda Dagmada Douglas ee mashruuca dhismaha Giga Watt. Waxay fidin doontaa biyaha gudaha, biyaha waraabka warshadaha iyo khadadka bulaacada fayadhowrka, waxay rakibi doontaa marin biyood, vault, landscaping, nalalka waddooyinka iyo tas-hiilaadka biyaha duufaanka, iyo qodida, isu-geynta iyo laamiga wadada dhex marta guriga iyadoo la adeegsanayo daba-marin loogu talagalay gawaarida dabka. agagaarka. Giga Watt wuxuu maalgelin doonaa $ 20 milyan, isagoo hayn doona 16 shaqooyin isla markaana u abuuri doona 61 shaqo mashruucan. Sanduuqa CERB waxaa u dhigma $ 94,741 ilaha gudaha.
Franklin County - $ 1.7 milyan oo deyn ah iyo $ 300,000 oo deeq ah dekedda Pasco oo loogu talagalay mashruuca Xarunta Cilmi Baarista Cirka. Mashruucan lammaanaha ah ee gaarka loo leeyahay ayaa lagu dhisi doonaa dhisme bir ah oo horay loo farsameeyay oo dhan 17,727 dhudhun laba jibbaaran oo leh xaashi bir ah iyo saqaf bir ah Waaxda Tamarta ee Mareykanku waxay ku dhisi doontaa $ 26 milyan oo qalab cilmiyaysan oo casri ah dhismahan, iyadoo la sii hayn doono 15 shaqooyin isla markaana loo abuuri doono saddex shaqo mashruucan. Sanduuqa CERB waxaa u dhigma $ 600,000 ilaha maxalliga ah.
Degmada Jefferson - $ 50,000 $ oo la siiyo Port of Port Townsend si loogu sameeyo daraasad macquul ah si loo sameeyo qorshe ganacsi oo ku saabsan guryaha ku yaal Quilcene Marina iyo goobta warshadaha taasoo taageeri doonta kobaca kiraystayaasha, joogtaynta maaliyadeed ee dekedda iyo faa'iidooyinka kale ee bulshada. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 17,000 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Baasifigga - $ 49,200 ayaa loo qoondeeyay County Pacific si loogu sameeyo daraasad macquul ah si loo horumariyo guud ahaan qorshaha horumarinta dhaqaalaha ee wax looga qabanayo kobaca dhaqaalaha ee degan Degmooyinka Pacific, oo ay ku jiraan lix goobood oo juquraafi ahaan / dhaqan ahaan u kala duwan qorshaynta hoose. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 16,400 oo ah ilaha maxalliga ah.
Gobolka Skagit - $ 50,000 oo deeq ah oo la siiyo Port of Anacortes si loo horumariyo istaraatiijiyad dhisme oo ay ku jiri doonaan qiimeyn suuqa, qorshaynta goobta fikradeed iyo qorshe ganacsi oo loogu talagalay guryaha dekedda agteeda. Sanduuqa CERB waxaa u dhigma $ 29,000 ilaha maxalliga ah.
Degmada Snohomish - $ 45,000 oo deeq ah oo loogu talagalay Magaalada Everett ee Xarunta Hal-abuurka Everett. Tani waa daraasad macquul ah oo lagu dhameystirayo shuruudaha dhismaha, taageerada dhaqaale iyo howlaha xarunta la soo jeediyay. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 13,500 ilaha maxalliga ah.
“Barnaamijka CERB waxaa loogu talagalay in looga jawaabo baahiyaha horumarinta ganacsiga ee soo ifbaxaya ee kaabayaasha bulshada iyo in la bixiyo qorshe suuragalnimo fog si looga caawiyo bulshada qorsheynta horumarka ganacsiga mustaqbalka. Mashaariicda maanta la ansixiyay waa tusaalooyin hagaagsan oo ku saabsan sida CERB ay ula shaqeyso beesheena. ” ayuu yidhi Guddoomiyaha CERB David Rhoden
Brian Bonlender, oo ah agaasimaha waaxda ganacsiga ee gobolka ayaa yidhi: "Maalgashiyadan la bartilmaameedsaday ee ka soo baxay miisaaniyada caasimada Washington waxay muhiim u yihiin dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee loo baahan yahay si loo taageero koboca dhaqaalaha iyo abuurista shaqooyin xoojiya bulshooyinkeena reer miyiga ah."
Sii-eegida CERB's 2015 -17 Biennium ee Dib-u-eegista oo iska hubi khariidadda mashruuca is-dhexgalka ee CERB ee mashaariicda la ansixiyay 2015-17.
Laga soo bilaabo 1982, CERB waxay ku dhowaad $ 174 milyan u goysay maamullada maxalliga ah ee gobolka oo dhan, maalgashi abuuraya in ka badan 35,000 oo shaqo, iyo maal-gashiga raasumaalka gaarka loo leeyahay oo ah $ 5.6 bilyan ($ 34 ilaa $ 1) oo ku soo noqoshada maalgashiga CERB.
Janea Eddy, Agaasimaha Barnaamijka CERB & Xiriiriyaha Qabiilka, (360) 725-3151
← Washington waa Gobolka ugu sareeya Ameerika ee Ganacsiga 2017 Barnaamijka New Americans wuxuu ka caawiyaa xubnaha bulshada inay dhammaystiraan waddada dhalashada →